Girazi Railing Standoff Vagadziri uye Vatengesi - China Glass Kurovera Standoff Factory
Simbi dzesimbi dzesimbi dzinoshandiswa pakati pegirazi negirazi
Kukanda simbi inzira yemazuva ano ine midzi yekare. Muchikamu chekukanda simbi, maumbirwo esimbi anoumbwa nekudururira simbi yakanyungudutswa muforoma mhango, uko iyo inotonhorera uye ndokuzotorwa kubva muforoma. Simbi yekukanda ingangodaro yekutanga uye ine simba zvakanyanya mumaindasitiri maitiro munhoroondo. Yaigadzira zvinhu zvakawanda zvesimbi zvinoshandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva: zvikamu zvemotokari, mavhiri ezvitima, zvigadziko zvemarambi, zvikwiriso zvemabhazi echikoro, uye zvimwe zvakawanda. Uyezve, simbi yekukanda masisitiri inotsamira pakuzvigadzira simbi senge inodhura-sosi yezvinhu zvakasvibirira, ichinyanya kudzora marara esimbi anogona kuzopedzisira araswa.
Stainless Simbi Frameless inogadziriswa Girazi Standoff ye balustrade / girazi stair fittings
INVESTMENT KUKUNDA MAGadziriso Mukudyara kukanda, wakisi kana yakakodzera polymer pateni yakaputirwa nekunyudza mune inoonekera zvinhu zvinhu slurry. Kamwe iko kupfekedza kwekupfeka kwezvinhu kwakaomeswa ipapo kuita uku kwekunyudza kunodzokororwa kanoverengeka kuti kuwedzere ukobvu hwekupfeka uye simba rayo. Kana kara yekupedzisira yaomeswa wakisi yanyungudika uye simbi yakanyungudutswa inodururwa mudumbu rakagadzirwa nemhando yewakisi. Kana simbi ikasimba mukati mehuvhu, simbi yekukanda inobviswa ne b ...
Anogadziridzwa Masitepisi Handrail Sisitimu yeGirazi Standoff Yekusina girazi girazi Kutuka
Stainless Simbi inogadziriswa Girazi Balustrade Standoff yeGirazi
Wall Gomo Stainless Simbi Girazi Sign Sign
Stainless simbi Standoff Kutuka Masitepisi